Igcine ukubuyekezwa: uJan. 05 2018 | 5 imiz ufunde
Dates First njalo kuyethusa for yezizathu ezihlukahlukene. Uneminyaka ejabulile ukuba usuku, futhi amathuba yini ukuza, kodwa wena ukhathazeke ngokwenza bahle. Ingxenye yokwenza bahle kusho uhlela usuku ukuthi omunye umuntu uyojabulela, kodwa ungakwenza kanjani lokho uma ungazi okuningi ngabo kodwa? Uma wazi lwezandla zodiac, zama sisebenzisa lokho ukukusiza ukuhlela usuku ephelele. Funda on:
Uma uya ngosuku nge an Aries, qinisekisa ukuthi kuzoba ezimatasa. An Aries ngeke ami uthule isikhathi eside kakhulu, futhi udinga ukuba wenza okuthile ngaso sonke isikhathi. Ukwenza a umsebenzi onzima bengaphandle, like izintaba noma ngebhayisikili, akwazi ukusebenza ngabo. Uma ufuna ukuhlala ezindlini, zama zasendlini rock ekhuphuka. Qiniseka uya kusuka kwenye ingxenye usuku elilandelayo ngokushesha ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi kakhulu zokuthutha noma iyiphi indawo eyodwa noma bazophatheka baphelelwe isithakazelo fast – ngaphambi kosuku ngisho phezu!
Uma uya ngosuku nge Taurus, bazi ukuthi siphelela isibonakaliso obusa izinzwa, Ngokwenza kanjalo yini ukuthi uzosebenzisana izinzwa zabo wezemiSebenzi best. Iya yokudlela nice ukuthi ine ukudla okucebile, khona a yokunambitha iwayini, ukuchitha ukudansa ebusuku, noma uye ekhonsathini. Nomaphi lapho uya, bakulungele ukuchitha imali ngoba Taurus uthanda okunethezeka. Ukuba umhlaba uphawu, abazi khumbulani kokuba epikinikini nice ngaphandle njengoba nje kukhona hhayi eziningi ezizungeze izimbungulu, kanjalo uma uya ukuthi umzila, alethe abathile amakhandlela citronella.
Uma uya ngosuku nge Gemini, sibayise endaweni ethile cool, abayitoho, lapho kukhona okuningi zabantu emhlabeni ukuba abagcine kwavusa ngokwengqondo, futhi lapho ungaba nengxoxo emnandi. Gcina izihloko ukukhanya roll nalo lapho ngokushesha bashintshe izifundo. Abazi khumbulani iyiphi indawo lokho ezinomsindo noma umatasa ngempela, like a club, futhi empeleni like ukuthi. Bangase bathi bathanda izinto entsha, kodwa lesi sibonakaliso ucabanga bona uku entsha ngaphezu zinjalo, kanjalo ningamamukeli kude kakhulu ngaphandle induduzo yabo zone.
Uma uya ngosuku nge Cancer, fikisa them endaweni ethile ukuthi bayazazi, endaweni ethile wazi ukuthi uke waba ngaphambi. Badinga nendawo abayijwayele ukubenza bazizwe ekhululekile futhi bavume ukuvula kuwe. Cishe A restaurant quiet kuba ukubheja yakho umhlabeleli, ikakhulukazi uma bakhonza induduzo ukudla futhi babe osofa esikhundleni izihlalo kanzima. Tshela isikhonzi hhayi ukuba ingazihlupha nobabili kakhulu ukuze babe nesikhathi esiningi sokuba babe ukhululekile nawe, kanye amabili ungakwazi ukuxhuma ngokomzwelo.
Uma uya ngosuku nge Leo, Yilesi isibonakaliso sokuthi uthanda drama, ngakho zama ukuyobukela ibhayisikobho noma yemidlalo. Uma uya movie, ukwenza isiqiniseko sokuthi Flick yakamuva nge star, futhi uma uya ebhayisikobho, ukwenza isiqiniseko sokuthi show ezishisayo laphaya manje. Bathanda ukuba bazizwe nabantu in, kanjalo nomaphi lapho uya, ukwenza kube indawo hot. Uma siphelela super flirty nge hhayi nje nawe, kodwa bonke ufika nabo, uzizwe ukhululekile ukukhombisa umhawu kancane. Empeleni uthanda ukuthi.
Uma uya ngosuku nge Virgo, ningenzi lutho enkulu kakhulu noma ahlotshiswe, futhi ningamamukeli kuphi ezinomsindo noma umatasa. Kwenze indawo ethule lapho bezwe imicabango yabo. Zingakwazi esiwusizo kakhulu, futhi angeke ukuthole uma yini Ummeli do, kungakhathaliseki ukuthi romantic ucabanga ukuthi. Virgo isibonakaliso impilo, kanjalo zama yokudlela ukuthi ukhonza ukudla okunempilo, noma ukuya ejimini nabo. Qiniseka ukuthi ithobe nokungazethembi zabo ngokushesha, ikakhulukazi ngemizimba yabo, kanjalo uzikhokhele ezinye izincomo eqotho.
Uma uya ngosuku nge Libra, ziyise an Museum art, i-galley yezithombe, noma art umbukiso. Lokhu isibonakaliso sokuthi uyakwazisa nkulumo kwezobuciko kakhulu. Ungenza into wobuciko nabo, like ukuya ingilazi zobumba noma a studio glassblowing. Bathi uyophila isenzo uqamba into ethile nawe. Ungazama futhi uya entsha, spot trendiest in town, ngabe kungcono yokudlela, club, noma park. Libras like one-on-one ukunakwa, kanjalo ngisho uma uzungezwe abantu, gcina amehlo akho kubo.
Uma uya ngosuku nge Scorpio, unamathele izindawo ukukhanyisa dark. Uqamba ukhangwa ebumnyameni, kanjalo no dates day. Zingaba ebusuku izikhova too, kanjalo uzizwe ukhululekile ukuqala usuku ngasekupheleni. Bathanda isayensi, ukuze ungakwazi zama emnyuziyamu isayensi, ikakhulukazi once iningi labantu usuhambile bangaba yedwa ngokuphelele nawe. Baphinde like the side olubi izifundo zokuphila futhi Taboo, ngakho uma ungakwazi sibayise endaweni ethile ekubhekaneni sex, ukufa, noma igazi and GUTS, bona uzoba cishe ziyanswininiza nge glee.
Uma uya ngosuku nge Sagittarius, avulekele an adventure. Lesi sibonakaliso uthanda ukwenza izinto emzweni odlulayo, kanjalo nani uhlela cishe ngeke empeleni kwenzeke. You ngizoqala out kulungile, kodwa ke veer kwenye, kanjalo Roll nalo. Sagittarius uthanda amasiko kanye nezinye amazwe, ngakho-ke ukuba yokudlela ukuthi ukhonza cuisine exotic, futhi uma ungakwazi ukuthatha uhambo, do it. Noma ngabe eseduze nawe uhlale a amahora ambalwa, noma wena hop ebhanoyini ukuwela ulwandle, siphelela up for the ride. Something extreme ayengase futhi ukusebenza, like Skydiving.
Uma uya ngosuku nge Capricorn, ukwenza kube njengoba bendabuko ngangokunokwenzeka. Dinner kanye ibhayisikobho a-Kulungile lokhu sibonakaliso. Abazi like kulandela ngaphandle induduzo yabo zone, futhi bafuna ukwenza lokho asebekwazi kakade kahle. Namathela kwavamile kubo futhi bahlale kude crazy. Uma ungathatha ukuba iqembu dinner lapho eziningi ngempumelelo, Abantu ezibalulekile kuyoba, ukuthi uzoba amaphuzu ezinye amaphuzu sína. Bayakuthanda hobnob nabantu up the esiphakeme emphakathini.
Uma uya ngosuku nge an Aquarius, ukwenza kube njengoba unconventional ngangokunokwenzeka. Lesi sibonakaliso uthanda izinto azivamile futhi kuhlukile yini Zazisho ngokujwayelekile ukwenza, ukuze bacindezela kuze ngaphandle induduzo yakho zone ngangokunokwenzeka. Ubathola futhi ukhululekile usuku iqembu, ikakhulukazi ngenxa yokuthi bafuna ukuba abangane nawe kuqala ukuze azama ukugcina it abayitoho. Iya izindawo eco-friendly, big on ezibuyelelweko, noma lapho ungenza abanye umsebenzi wosizo ndawonye, bebutha udoti like, ukuvolontiya at a ekhishini isobho, noma uya a dinner abahluphekile.
Uma uya ngosuku nge Pisces, bazi ukuthi lo uphawu super romantic, cishe kunanoma yimuphi omunye, ngakho uzoba bayakwazisa yikuphi ukushukuma komzimba sappy. A dinner yothando lapho ubhekene emi kanye quartet string lihambisana kuwe ebhishi kuba Zazisho bathande into. Pisces enza bathande amanzi, ukuze ungakwazi ukuya yokudlela lapho uzoba ukubukwa amanzi. Baphinde umculo, ngakho zama ekhonsathini, the symphony, noma siphume ukudansa. Bathi ngempela nje ufuna ukusondela kuwe. Choice uyinqaba? The Zoo. Bathanda izilwane.